မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ၊ အာဆငျနယျ ၊ ၀ုဗျ တို့ရဲ့ ယူရိုပါလိဂျ ပှဲစဉျတှေ အတှကျ ခနျ့မှနျးခကျြမြား - SPORTS MYANMAR
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ၊ အာဆငျနယျ ၊ ၀ုဗျ တို့ရဲ့ ယူရိုပါလိဂျ ပှဲစဉျတှေ အတှကျ ခနျ့မှနျးခကျြမြား
ခနျြပီယံ လိဂျ ပှဲစဉျတှေ အပွီး မှာတော့ ယူရိုပါ လိဂျ ပှဲစဉျ တှေ ရောကျရှိ လို့ လာခဲ့ ပါပွီ ။ ပှဲစဉျ ၁ မှာ ၀ုဗျ က လှဲရငျ အာဆငျနယျ နဲ့ မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ တို့ အဆငျပွေ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။ ယခု ပှဲစဉျ ၂ မှာ လညျး ၀ုဗျ ဟာ ဥရောပ အတှေ့ အကွုံရှိ တဲ့ ဘကျဆဈတပျ ရဲ့ တူရကီ ကှငျးကို သှား ကစား ရမှာ ဖွဈလို့ အခွေ အနေ မကောငျးနိုငျ ပါဘူး ။ ယူနိုကျတကျ ကတော့ အဝေးကှငျး မှာ နယျသာလနျ ကလပျ အယျခမာ နဲ့ ရငျဆိုငျ ရမှာ ဖွဈပွီး အာဆငျနယျ ကတော့ အိမျကှငျး မှာ ဘယျလျဂြီယံ ကလပျ စတနျးဒတျလိဂျ နဲ့ ယှဉျပွိုငျ ကစား ရမှာ ဖွဈ ပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့ မနကျဖွနျ မှာ ယှဉျပွိုငျ ကစားမယျ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ၊ အာဆငျနယျ နဲ့ ၀ုဗာဟမျတနျ အသငျး တို့ရဲ့ ယူရိုပါလိဂျ ပှဲစဉျ ခနျ့မှနျးခကျြ တှေ ကို ( Sky Sports ) ဖျောပွ ပေးလိုကျ ရ ပါတယျ . . .
၁ ။ အဇေကျ အယျခမာ – မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ
လကျရှိ မှာတော့ မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ ဟာ တဈပှဲ တိုး ဗြုဟာ တှေ နဲ့ ရှဆေ့ကျ နရေ ပါတယျ ။ ပုံမှနျ ဆိုရငျ တော့ ဒီပှဲ မြိုး ကို ယူနိုကျတကျတို့ အေးအေး ဆေးဆေး ကြျောဖွတျ နိုငျမယျ လို့ ထငျခငျြ စရာ ပါ ။ အသငျး သားတှေ ရဲ့ ခွစှေမျး နဲ့ အားထုတျမှု တှေ ကို နညျးပွ ဆိုးရှား မကနြေပျ ဒေါသထှကျ နတော တှေ ကို အငျတာဗြုး တှေ မှာ တှရေ့ မှာပါ ။ အသငျး မှာ က ထှကျခငျြ တဲ့ သူတှေ နဲ့ ၊ သုံးမရ တဲ့ သူတှေ နဲ့ ပွညျ့နှကျ နေ ပါတယျ ။
အသငျးရဲ့ ယုံကွညျမှုတှေ က ကဆြငျး လာသလို ကိုယျ့ အတှကျ သာ ကစား နတေဲ့ ပုံစံမြိုး တှေ ကိုလညျး မွငျလာ ရ ပါတယျ ။ အယျခမာ ဟာ နညျးစနဈ ပိုငျး အားကောငျး တဲ့ အသငျးပါ ။ ယူနိုကျတကျ ကို ကြိနျးသေ ပေါကျ အန်တရာယျ ပွုနိုငျ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ လိဂျ အဆငျ့ ခငျြး ကှာတာ ကွောငျ့ ယူနိုကျတကျ ဟာ အယျခမာ အတှကျ ကွီးမားတဲ့ အခကျအခဲ တဈခု ဖွဈနေ ဦးမှာပါ ။ ပွညျတှငျး ဘကျကို ပိုမို အားထညျ့ ဖို့ လိုတာ ကွောငျ့ ယူရိုပါ လိဂျ မှာ စောစော စီးစီး အခွအေနေ ကောငျးနေ ဖို့ လိုအပျ ပါတယျ ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – အယျခမာ ၀ – ၁ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ
၂ ။ ဘကျဆဈတပျ – ၀ုဗာဟမျတနျ
ဒီနှဈ ပရီးမီးယား လိဂျ အတှကျ ပထမဆုံး နိုငျပှဲ ကို ၀ုဗျ တို့ ရှာဖှေ နိုငျခဲ့ ပါပွီ ။ သူ့ရဲ့ ကစား သမား အခြို့ ဟာ ပငျပနျး နကွေတယျ လို့ နညျးပွ ဆနျးတို့ က ဆိုခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါဘာ ကွောငျ့ လညျး ဆိုတော့ နူနို ဆနျးတို့ ဟာ လူစာရငျး ကို အပွောငျး အလဲ မလုပျ ခဲ့လို့ပါ ။ ကစား သမား သဈ ၃-၄ ယောကျလောကျ ထပျရောကျ လာပမေယျ့ ပှဲထှကျ စာရငျး ကတော့ မနှဈ က နဲ့ မခွားနားခဲ့ ပါဘူး ။ ပှဲဆကျမြားလာခြိနျ မှာ ဒါတှေ က ဒုက်ခ ရောကျတတျ ပါတယျ ။
၀ကျဖိုဒျ့ နဲ့ ပှဲမှာ ၀ုဗျ တို့ ရလဒျ ကောငျးခဲ့ ပါတယျ ။ ခံစဈ ကစားပုံလညျး ကောငျးပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဘကျဆဈတပျ ဟာ ဥရောပ အတှေ့ အကွုံရှိ သလို အိမျကှငျး မှာ ဆိုရငျ အသငျးကွီးတှေ ကို တောငျ အန်တရာယျ ပေးနိုငျ ပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ တူရကီ ခရီးစဉျ ဟာ ၀ုဗျ အတှကျ လှယျကူမှာ မဟုတျတာ အသအေခြာ ပါပဲ ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – ဘကျဆဈတပျ ၂ – ၁ ၀ုဗျ
၃ ။ အာဆငျနယျ – စတနျးဒတျလိဂျ
အာဆငျနယျ ရဲ့ လူငယျလေး တှေ ကို နောကျထပျ မွငျတှေ့ ရမယျ့ ပှဲပါ ။ စတနျးဒတျလိဂျ ဟာ အာဆငျနယျ အတှကျ ပွိုငျဘကျ မဟုတျပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ တနျပွနျ တိုကျစဈ တဈခကျြ တော့ သတိပွု ရပါမယျ ။ အာဆငျနယျ လူငယျတှေ ဟာ ဘောလုံး ကိုငျ ကစားတတျ ဖို့ သငျကွား ပေးထားပုံ ပါပဲ ၊ ဘောလုံး ခွထေဲ ရှိနေ ခြိနျ မှာ ပိုပွီး ကောငျးတတျ ကွပါတယျ ။ အကွီးတှေ ထဲ က ဟိုးဒငျး နဲ့ ဘယျလာရငျ တို့ လောကျပဲ ပါလာနိုငျ ပါတယျ ။
အိုးထရကျဖိုဒျ့ ပှဲမှာ မပါတဲ့ တိုငျယာနီ လညျး ပါလာနိုငျ ပါတယျ ။ ဂြိုးဝီးလော့ ၊ ဘာကာယို ဆာကာ နဲ့ မာတငျနယျလီ တို့ ဟာ စတနျးဒတျလိဂျ ကို ကောငျးကောငျး ထိုးဖောကျနိုငျ ပါတယျ ။ သူတို့ ဟာ အသငျးကွီး မှာတောငျ ၀ငျ ကစားလို့ ရတဲ့ အဆငျ့ ကို စပွီး ရောကျနေ ကွပါပွီ ။ အာဆငျနယျ လူငယျတှေ အတှကျတော့ ယူရိုပါလိဂျ ဟာ တကယျကောငျးမှနျတဲ့ စှနျ့စားခနျး ခရီးရှညျကွီး ဖွဈနေ မှာပါ ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – အာဆငျနယျ ၃ – ၀ စတနျးဒတျလိဂျ
ပရိသတျကွီးတို့ ရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြ တှေ က ရော ဘယျလို ဖွဈမလဲ ဗြာ . . .
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ၊ အာဆင်နယ် ၊ ၀ုဗ် တို့ရဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ အတွက် ခန့်မှန်းချက်များ
ချန်ပီယံ လိဂ် ပွဲစဉ်တွေ အပြီး မှာတော့ ယူရိုပါ လိဂ် ပွဲစဉ် တွေ ရောက်ရှိ လို့ လာခဲ့ ပါပြီ ။ ပွဲစဉ် ၁ မှာ ၀ုဗ် က လွဲရင် အာဆင်နယ် နဲ့ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် တို့ အဆင်ပြေ ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ယခု ပွဲစဉ် ၂ မှာ လည်း ၀ုဗ် ဟာ ဥရောပ အတွေ့ အကြုံရှိ တဲ့ ဘက်ဆစ်တပ် ရဲ့ တူရကီ ကွင်းကို သွား ကစား ရမှာ ဖြစ်လို့ အခြေ အနေ မကောင်းနိုင် ပါဘူး ။ ယူနိုက်တက် ကတော့ အဝေးကွင်း မှာ နယ်သာလန် ကလပ် အယ်ခမာ နဲ့ ရင်ဆိုင် ရမှာ ဖြစ်ပြီး အာဆင်နယ် ကတော့ အိမ်ကွင်း မှာ ဘယ်လ်ဂျီယံ ကလပ် စတန်းဒတ်လိဂ် နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစား ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် မနက်ဖြန် မှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစားမယ့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ၊ အာဆင်နယ် နဲ့ ၀ုဗာဟမ်တန် အသင်း တို့ရဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ပွဲစဉ် ခန့်မှန်းချက် တွေ ကို ( Sky Sports ) ဖော်ပြ ပေးလိုက် ရ ပါတယ် . . .
၁ ။ အေဇက် အယ်ခမာ – မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်
လက်ရှိ မှာတော့ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ တစ်ပွဲ တိုး ဗျုဟာ တွေ နဲ့ ရှေ့ဆက် နေရ ပါတယ် ။ ပုံမှန် ဆိုရင် တော့ ဒီပွဲ မျိုး ကို ယူနိုက်တက်တို့ အေးအေး ဆေးဆေး ကျော်ဖြတ် နိုင်မယ် လို့ ထင်ချင် စရာ ပါ ။ အသင်း သားတွေ ရဲ့ ခြေစွမ်း နဲ့ အားထုတ်မှု တွေ ကို နည်းပြ ဆိုးရှား မကျေနပ် ဒေါသထွက် နေတာ တွေ ကို အင်တာဗျုး တွေ မှာ တွေ့ရ မှာပါ ။ အသင်း မှာ က ထွက်ချင် တဲ့ သူတွေ နဲ့ ၊ သုံးမရ တဲ့ သူတွေ နဲ့ ပြည့်နှက် နေ ပါတယ် ။
အသင်းရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ က ကျဆင်း လာသလို ကိုယ့် အတွက် သာ ကစား နေတဲ့ ပုံစံမျိုး တွေ ကိုလည်း မြင်လာ ရ ပါတယ် ။ အယ်ခမာ ဟာ နည်းစနစ် ပိုင်း အားကောင်း တဲ့ အသင်းပါ ။ ယူနိုက်တက် ကို ကျိန်းသေ ပေါက် အန္တရာယ် ပြုနိုင် ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လိဂ် အဆင့် ချင်း ကွာတာ ကြောင့် ယူနိုက်တက် ဟာ အယ်ခမာ အတွက် ကြီးမားတဲ့ အခက်အခဲ တစ်ခု ဖြစ်နေ ဦးမှာပါ ။ ပြည်တွင်း ဘက်ကို ပိုမို အားထည့် ဖို့ လိုတာ ကြောင့် ယူရိုပါ လိဂ် မှာ စောစော စီးစီး အခြေအနေ ကောင်းနေ ဖို့ လိုအပ် ပါတယ် ။
ခန့်မှန်းချက် – အယ်ခမာ ၀ – ၁ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်
၂ ။ ဘက်ဆစ်တပ် – ၀ုဗာဟမ်တန်
ဒီနှစ် ပရီးမီးယား လိဂ် အတွက် ပထမဆုံး နိုင်ပွဲ ကို ၀ုဗ် တို့ ရှာဖွေ နိုင်ခဲ့ ပါပြီ ။ သူ့ရဲ့ ကစား သမား အချို့ ဟာ ပင်ပန်း နေကြတယ် လို့ နည်းပြ ဆန်းတို့ က ဆိုခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဘာ ကြောင့် လည်း ဆိုတော့ နူနို ဆန်းတို့ ဟာ လူစာရင်း ကို အပြောင်း အလဲ မလုပ် ခဲ့လို့ပါ ။ ကစား သမား သစ် ၃-၄ ယောက်လောက် ထပ်ရောက် လာပေမယ့် ပွဲထွက် စာရင်း ကတော့ မနှစ် က နဲ့ မခြားနားခဲ့ ပါဘူး ။ ပွဲဆက်များလာချိန် မှာ ဒါတွေ က ဒုက္ခ ရောက်တတ် ပါတယ် ။
၀က်ဖိုဒ့် နဲ့ ပွဲမှာ ၀ုဗ် တို့ ရလဒ် ကောင်းခဲ့ ပါတယ် ။ ခံစစ် ကစားပုံလည်း ကောင်းပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘက်ဆစ်တပ် ဟာ ဥရောပ အတွေ့ အကြုံရှိ သလို အိမ်ကွင်း မှာ ဆိုရင် အသင်းကြီးတွေ ကို တောင် အန္တရာယ် ပေးနိုင် ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် တူရကီ ခရီးစဉ် ဟာ ၀ုဗ် အတွက် လွယ်ကူမှာ မဟုတ်တာ အသေအချာ ပါပဲ ။
ခန့်မှန်းချက် – ဘက်ဆစ်တပ် ၂ – ၁ ၀ုဗ်
၃ ။ အာဆင်နယ် – စတန်းဒတ်လိဂ်
အာဆင်နယ် ရဲ့ လူငယ်လေး တွေ ကို နောက်ထပ် မြင်တွေ့ ရမယ့် ပွဲပါ ။ စတန်းဒတ်လိဂ် ဟာ အာဆင်နယ် အတွက် ပြိုင်ဘက် မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် တန်ပြန် တိုက်စစ် တစ်ချက် တော့ သတိပြု ရပါမယ် ။ အာဆင်နယ် လူငယ်တွေ ဟာ ဘောလုံး ကိုင် ကစားတတ် ဖို့ သင်ကြား ပေးထားပုံ ပါပဲ ၊ ဘောလုံး ခြေထဲ ရှိနေ ချိန် မှာ ပိုပြီး ကောင်းတတ် ကြပါတယ် ။ အကြီးတွေ ထဲ က ဟိုးဒင်း နဲ့ ဘယ်လာရင် တို့ လောက်ပဲ ပါလာနိုင် ပါတယ် ။
အိုးထရက်ဖိုဒ့် ပွဲမှာ မပါတဲ့ တိုင်ယာနီ လည်း ပါလာနိုင် ပါတယ် ။ ဂျိုးဝီးလော့ ၊ ဘာကာယို ဆာကာ နဲ့ မာတင်နယ်လီ တို့ ဟာ စတန်းဒတ်လိဂ် ကို ကောင်းကောင်း ထိုးဖောက်နိုင် ပါတယ် ။ သူတို့ ဟာ အသင်းကြီး မှာတောင် ၀င် ကစားလို့ ရတဲ့ အဆင့် ကို စပြီး ရောက်နေ ကြပါပြီ ။ အာဆင်နယ် လူငယ်တွေ အတွက်တော့ ယူရိုပါလိဂ် ဟာ တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ စွန့်စားခန်း ခရီးရှည်ကြီး ဖြစ်နေ မှာပါ ။
ခန့်မှန်းချက် – အာဆင်နယ် ၃ – ၀ စတန်းဒတ်လိဂ်
ပရိသတ်ကြီးတို့ ရဲ့ ခန့်မှန်းချက် တွေ က ရော ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ ဗျာ . . .